Itoobiya oo lagala baxsaday diyaarad dagal (Xagee lala aaday?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: War kasoo baxay wassaaradda gaashaandhiga Itoobiya ayaa lagu sheegay in duuliye milateri oo dalkaas u dhashay uu diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah (helicopter) uu ula baxsaday dhanka dalka Eritrea ee colka xun kala dhaxeeyo Itoobiya.
War goor sii horeysay oo Isniintii aheyd kasoo baxay wasaaradda difaaca Itoobiya ayaa lagu sheegay in duuliyaha diyaaradda, caawiyihiisa iyo Injineerka lagu qasbay iney ku degaan ciida dalka Eritrea. laakiin waxaa markii dambe la ogaaday inuu duuliyuhu la baxsaday diyaaradda.
Diyaaradda aya howl kormeer oo caadi ah ku jirtay markii la waayey jimcihii lasoo dhaafay, waxaana wixii xilligaas ka dambeeyey ciidamada Itoobiya ka raadinayeen woqooyiga dalkaas.
Horay uma dhicin in ciidamada Itoobiya u baxsadaan dhanka dalka Itoobiya, halka marar badan ciidamada Eritrea ay u soo baxsan jireen dhanka dalka Itoobiya.
Xiririika Eritrea iyo Ethiopia ayaan wanaagsaneyn muddo dheer, iyadoo Eritrea ka xorowday Ethiopia sanadkii 1993 kadib 30 sano oo dagaal jabhadeed ah.
Labada dal ayaa dhowr dagaal dhexmareen wixiii xilligaas ka dambeeyey, waxaana Itoobiya beesha caalmku saartay cadaadis xoog leh iyo cunaqabateyn xagga hubka ah.